Abavelisi bebhetri beLiFePo4 - abaThengi beLiFePo4 ababoneleli kunye nefektri
Amandla ombane aphezulu
Ubushushu bebhetri ephezulu
I-48V yoBomiPO4 yoGcino lwaMandla oGcino lwaMandla
I-DET lifePo4 3.2V iiseli zebhetri
Ipakethe ye-A-3 12V LiFePO4 Series
2 ~ 3 maleko Metal Car UPS Industrial Battery Ukugcinwa ...
I-DET 48V yeLithium Battery Pack
YENZA umjikelo webhetri enzulu
Uhlobo lweSolar Gel Range VRLA Ibhetri
I-DET Smart Powerwall 5kwh 7kwh 10kwh LiFePo4 ibhetri
Ibhetri ekhokelayo ye-asidi ene-DET ngaphambili yesiphelo yenzelwe ngokukodwa izicelo zonxibelelwano, ezinobomi obujikelezayo beminyaka eli-12.
Ukujija ipleyiti egobile, ifomula ekhethekileyo yokuncamathisela kunye netekhnoloji yokwahlula i-AGM yamkelwe.
Ukusebenza okuzinzileyo, ukungaguquguquki okuhle, okulungele amaxesha onxibelelwano ngocingo lwangaphandle kunye nezinye iindlela zokufaka amandla.
Ulwakhiwo olude nolumxinwa kunye noyilo lwesiphelo sangaphambili lwenza kube lula ukufaka nokugcina, kwaye ubungakanani buhambelana ngokugqibeleleyo ne-19 ′ / 23 ′ ikhabethe esemgangathweni / yokubeka.
Ipakethe ye-DET LiFePo4 sisisombululo senkqubo yokugcina amandla ebhetri ephuhliswe yidathai, eneenzuzo zokhuselo kunye nokuthembeka, ubomi benkonzo ende, indawo encinci yomgangatho, ukusebenza okulula kunye nokugcinwa.
Iseli ye-lithium phosphate cell yamkelwe, eyona iseli ikhuselekileyo kwibhetri ye-lithium.
Itekhnoloji yolawulo ekwabelanayo yolawulo ekwabelaneni ngoku ixhasa ukuxubana kweebhetri ezindala nezintsha, kunciphisa kakhulu ikapax.
Inkqubo ye-BMS yomaleko omninzi, idityaniswe nenkqubo ye-GRPS / ye-APP, iyaqonda ulawulo lwebhetri olukrelekrele kwaye iyayinciphisa kakhulu i-OPEX.
Ukuxinana kwamandla kwe-det LiFePO4 kuphezulu, kwaye uxinano lwamandla e-aluminium yeshell iqokobhe le-LiFePO4 yi-180wh / kg Ibhetri inentsebenzo yokhuseleko elungileyo, ubume bebhetri abuyi kutshintsha ngexesha lokutshaja kunye nokukhupha inkqubo, kwaye ayizukutsha kwaye uqhume.
Ngapha koko, kukhuselekile kakhulu nangaphantsi kweemeko ezizodwa ezinje ngesekethe emfutshane, ukugqithisa ngaphezulu, ukugqithisa kunye nokufuna, ngobomi bomjikelo omde. Ubomi bomjikelo we-1C webhetri ye-LiFePO4 ngokubanzi ingaphezulu kwamaxesha angama-3500,
Uluhlu lokugcina amandla kusapho nguDET AMANDLA Isisombululo sohlobo lwekhabethe yokugcina ibhetri yenkqubo yombane ephuhliswe yinkampani yamandla idibanise ibhetri yokugcina amandla kunye namandla amakhulu okwandisa, indawo encinci, intshukumo efanelekileyo kunye nokubonakala kolwazi.
Uhlobo lwekhabhinethi oluhlangeneyo lwebhetri lunokuvelisa ibhetri yemodyuli nganye ngokuzinzileyo ngokusebenzisa isilinganisi seBMS, esenza ukuba ibhetri iphile ixesha elide.
Ibhetri ye-LiFePO4 eveliswe yinkampani yethu inokumelana nobushushu obuphezulu, uluhlu olukhulu lomthamo, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima bokukhanya Iimpawu zetekhnoloji yokungangcoliseki, ukukhula ngokukhawuleza, kwaye kwamkelwa ngabasebenzisi.
Lukhetho lokuqala kwisisombululo sebhetri esigcina imfuno ephezulu
Ibhetri eyi-12.8v ye-lithium ibuyisela ibhetri ye-12V yokukhokelela-asidi.
Kwi-2020, isabelo sentengiso se-lead-acid ibhetri iya kudlula kwi-63%, esetyenziswa kakhulu kwizixhobo zonxibelelwano, amandla okulinda kunye nenkqubo yamandla elanga.
Nangona kunjalo, ngenxa yexabiso lokugcina eliphezulu, ubomi bebhetri obufutshane kunye nongcoliseko olukhulu kwindalo esingqongileyo, ngokuthe ngcembe ithathelwa indawo ziibhetri ze-lithium-ion.
Kulindeleke ukuba isabelo sentengiso seebhetri ze-lithium-ion zibuyiselwe kwiibhetri eziphezulu ze-acid ekhokelela kwi-2026.
Umbane weyunithi yeLiFePO4 ibhetri yi-3.2V, kwaye i-voltage edibeneyo iyafana ncam naleyo yebhetri ye-lead-acid.
Ngaphantsi kwevolumu efanayo, ibhetri ye-LiFePO4 ine-eneji ephezulu yamandla kunye nobunzima bokukhanya.
Okwangoku, lolona khetho lufanelekileyo lokutshintsha ibhetri ye-lead-acid